PressReader - Ilanga langeSonto: 2019-01-06 - KNOWLEDGE SIMELANE
Ilanga langeSonto - 2019-01-06 - Izindaba -
UMCULI : NOMFUNDO NDEBELE/ XULU
ISIHLOKO : MANEPHUNEPHU UHLOBO LOMCULO : MASIKANDI UNYAKA : 2018 AMAPHUZU : 5/10
IPHIMBO ngelowesilisa kepha i-albhamu yonke enezingoma eziyi-14 ilotshwe ukuthi kucula unomfundo. Zimnandi izingoma zonke, zithakiwe futhi zihlanganiswe kahle. Ingoma yokuqala isihloko sithi “umugabe”. Lapha kuculwa ngosibali okuthiwa babuyela ezimbabwe ngoba sekuphume esikhundleni umengameli Mugabe, izintombi zabo ziyakhala ziyafa yindlala. Iyatholakala ezitolo noma kushayelwe kule nombolo ethi: 079 650 0970.
UMCULI : IZINTOMBI ZASEMTUBA ISIHLOKO : IGAM”ELISHA UHLOBO LOMCULO : MASIKANDI UNYAKA : 2018 AMAPHUZU : 6/10
INAMANDLA le albhamu yezintombi zasemtuba, ikwenza ulokhu uyiphindaphinda ngenxa yeziyalo okuculwa ngazo lapha.
Kukhona ingoma engeyesibili esihloko sithi “Makhelwane” lapho abaculi bekhuza izangoma ukuba zingaqhathi omakhelwane ngokuba zilokhu zinuka bona njalo uma abantu bezogingqa idayisa (ukubhula). Uphrojusa wayo yinkalakatha kulolu hlobo lomculo usmilose-tshitshi Xulu. Iyatholakala ezitolo zomculo noma kushayelwe kule nombolo ethi: 082 360 0200.
UMCULI : AMABHEKESHIYE ISIHLOKO : ICALA LENGOMA UHLOBO LOMCULO : MASIKANDI WALEMIHLA
UNYAKA : 2018 AMAPHUZU : 6/10
ZIYASHAYA lezi nsizwa, kuhle ukuba uphrojusa azame ukuba ngesinye isikhathi kushintshwe abadlali bezinsimbi, nezinsimbi uqobo zixutshwe.
Umsebenzi kaphrojusa yiwo lowo, kumele akwazi ngisho ukusiza nomculi ohamba phambili ukuba angaculi ngokhiye owodwa, kwezinye kumele aphakamise noma ehlise iphimbo. Nokho imnandi yonke le albhamu, iphimbo lohamba phambili lingena khaxa ezinsimbini. Iyatholakala ezitolo noma kushayelwe kule nombolo ethi: 084 305 0913. [email protected]